Zvese nezve jaundice mumakati | Noti Katsi
Kana iwe uchigara nekatsi yaunonamata, iwe uchamuda kuti agare aine hutano, asi chokwadi ndechekuti semunhu mupenyu, muhupenyu hwake hwese anogona kurwara kanopfuura kamwe chete. Kunyangwe paine hosha dzakakomba kupfuura dzimwe, kana chimwe chezviratidzo zvacho chiri jaundice uchafanirwa kunetseka zvakanyanya kana zvichibvira.
Nokudaro, Tichatsanangura zvese nezve jaundice mumakati: zvinokonzeresa, zviratidzo uye nezvimwe. Kutanga, isu tichakuudza izvo bilirubin, nenzira iyi iwe unogona kunzwisisa zvishoma zvirinani zvese zvatino tsanangura gare gare.
1 Chii chinonzi bilirubin?
2 Nei jaundice ichioneka mumakati?
2.1 Zviratidzo zvejundice mumakati
3 Chii chinonzi jaundice?
4.3 Isiri-hepatic jaundice
5 Unoita sei kuti uongorore?
6 Kurapa kupi?
Chii chinonzi bilirubin?
Bilirubin chigadzirwa chinogadzirwa apo eirotrocyte (masero matsvuku eropa) anoputsika pakupera kwehupenyu hwavo (rinova mazuva zana) uye anoparadzwa mumongo wefupa nesipere. Ivo vanobva pakuva neruvara rutsvuku rwehunhu kusvika pakuita yero, uye ndopazvinozoita bilirruibin.
Maitiro akaomarara apo hemoglobin inotanga kushandurwa kuita biliverdin uyezve ikava mafuta akasungunuka bilirubin. Izvi zvinoburitswa muropa uye zvinofamba zvichienda kuchiropa pamwe neprotein.
Kana yasvika pachiropa, inoshandurwa kuita conjugated bilirubin uye inoungana muguruva.. Nguva dzese nduru painodururira mudumbu, diki bilirubin inobuda neiyo bile nemaabhakitiriya. Izvi zvinoshandurwa kuita zvakasarudzika pigments: stercobilin (iyo inopa chigaro chine shava ruvara) uye urobilinogen (iyo inopa weti yero yero yero).
Nei jaundice ichioneka mumakati?
Sezvo iwe wave kugona kuona kubva kune zvakataurwa mune yapfuura poindi, iro basa rechiropa kiyi mune yese maitiro. Jaundice ichaonekwa mukati kati kana muviri wayo usingakwanise kuburitsa bilirubin uye zvimwe zvikamu zve bile.
Zviratidzo zvejundice mumakati
Jaundice pachayo yatove chiratidzo chinoratidza kuti kati ine matambudziko ehutano. Kunyangwe zvakakosha kuti uzive kuti chiratidzo chinonyatsooneka chechirwere ichi yeruvara rweyero.
Este yero yeganda Inogona kuwanikwa mumuromo, nzeve, uye munzvimbo dzisina hura uye ganda rekati rinogona kuoneka.
Chii chinonzi jaundice?
Jaundice ndiyo yero yeruvara rweganda, weti, serum uye nhengo nekuda kwekuunganidzwa kweiyo pigment inozivikanwa seye bilirubin muropa kana nyama.. Bilirubin inoumbwa apo masero matsvuku eropa anosvika kumagumo ehupenyu hwavo, ayo anotora mazuva angangoita zana. Aya masero eropa anoparadzwa mupesi uye mwongo wemapfupa, uye kubva kuhemoglobin, inova iyo pigment inovapa iwo ruvara, bilirubin inogadzirwa. Izvi zvinoburitswa mukutenderera uye zvinofamba zvichienda kuchiropa pamwe neprotein.
Muchiropa inoshandurwa kuita conjugated bilirubin uye inochengeterwa munduru. Nguva dzese nduru painodururwa kupinda muura mudiki, bilirubin shoma inobuda nezvikamu zveiyo bile. Chekupedzisira, uye mushure mekuita kwemabhakitiriya akati wandei, inoshandurwa kuita dzimwe pigments: stercobilin (iyo marara etsvina) uye urobilinogen (iyo weti).
Kana zvikaitika imhaka yekuti chimwe chinhu hachina kumira zvakanaka muchiropa; Iyo haigone kuzadzisa basa rayo uye haigone kubvisa bilirubin iri kupinda. Chiropa maseru (hepatocytes) anoburitsa pigment iyi mu bile canaliculi. iyo inomhanya kuburikidza neseru network, iyo inopfuura ichienda kune nduru.
Kune rimwe divi, kana masero aine imwe mamiriro ehutachiona kana akapiswa uye bilirubin isingakwanise kupfuura kune bile duct network, ndipo panowanikwa intrahepatic cholestasis.
Naizvozvo, zvinoitika kana chiropa hachigone kuburitsa bilirubin. Zvikonzero zvinowanzoitika ndezvi:
Zvinoitika kana bilirubin inoungana kunze kwechiropa nekuda kwekuvharika. Zvikonzero zvinowanzoitika ndezvi:
Neoplasm ari duodenum uye rwatata
Bile duct kuputika
Zvinoitika kana yakawandisa bilirubin inogadzirwa kuitira kuti chiropa chisakwanise kuburitsa iyo pigment semhedzisiro yekuparara kwemasero matsvuku eropa. Zvinokonzera ndezvi:
Utachiona kana hutachiona hutachiona
Unoita sei kuti uongorore?
Kana iwe uchifungidzira kuti kati yako ine jaundice unofanirwa kumutora kuenda nekuchipatara. Kamwe uriko, iwe unenge uine bvunzo dzepanyama uye akateedzana bvunzo, senge kuongororwa kweropa kana iyo ultrasound. Uye zvakare, pamwe nenhoroondo yezvechiremba, iwe unozogona kuziva kuti chii chingave chiri chikonzero.
Mumakati ane jaundice zviri nyore kuwana enzymes yechiropa yakakwirakunyangwe izvi zvisingaratidzi chirwere chepuraimari kana chepuraimari. Uku ndiko kungo tarisa chete asi iyo ultrasound uye radiological kudzidza ichagara ichidikanwa.
Kunyangwe izvi zvisati zvaitika, nhoroondo yezvokurapa uye ongororo yekutanga inobvumidza vet kuti vawane mamonyoro ehutachiona, mvura iri mudumbucystitis) uye zvakare uzive kana iwe uine chero mhando yekuratidzwa kune hepatotoxic zvinodhaka.
Nenzira iyi, jaundice inonzwisiswa sechiratidzo nekuda kwekuchinja uye nekuda kwechikonzero ichi, kutsvaga kana zvichinyatsoitika zvinodikanwa kuti uite bvunzo dzakazara.
Mushonga unoenderana zvakanyanya nechikonzero, icho chichifunga kuti kune zvakawanda zvirwere zvinounza jaundice sechiratidzo inogona kuve chero chinhu kubva kutora mishonga inorwisa mabhakitiriya kune shanduko mukudya. Izvo iwe zvausingatomboite kuzvirapa- mishonga usati watanga kubvunza kuna vet, nekuti neimwe nzira inogona kuuraya.
Tinovimba kuti wakazviwana zvichibatsira. Nenzira iyi, iwe unozogona kuve neiyo intuition yekuti katsi yako iri kurwara nemamiriro aya uye kana zvakadaro, chiremba wemhuka anokwanisa kumuongorora nekukurumidza kuti awane kurapa kwakakodzera kwazvo kwenyaya yake chaiyo.
Chero nzira, ikozvino sezvo iwe uchiziva izvo zviratidzo uye kurapwa kwejaundice mumakati, iwe unoziva zvishoma zvishoma kuti utarisire zviri nani hutano hwekati yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Zvirwere » Ndezvipi zviratidzo uye kurapwa kwejaundice mumakati?